Mhlawumbe akukho muntu ngubani akazange afune impendulo yombuzo kanjani ukushintsha into yokuxhuma. house Modern ayikwazi wacabanga ngaphandle basebenzise izinto zikagesi. Ngisho nasezimweni ezikhululekile kungenzeka kakhulu kude impucuko emadolobhaneni, lapho zisetshenziselwa abantu abahlala ngaphandle emaphakathi kwamanzi nokuthuthwa iphayiphi, kudingeka ugesi. Akumangalisi ukuthi zonke izinto ekhaya wiring ngenxa ukusetshenziswa kakhulu kancane kancane uzokhathala, ezidinga esikhundleni.
Nakuba ukufakwa enethiwekhi futhi ukushintsha kubhekwa umsebenzi zabesilisa, kungcono nje ngemibono, ngoba ayidingi amandla isilo esinonya, nakuba Yiqiniso, kubalulekile ukuba sicabangele ukuthi umsebenzi ludingeka. Ngokuvamile, kunalokho, kudingeka ukunemba esivela abesifazane. Ukwazi kanjani ukushintsha lapho uphuma khona, lo msebenzi isingasingathwa ngemizuzu embalwa nje.
Kwezinye izimo, kudingeka ukushintshwa? Little izizathu:
- oxhumana nokutubeka ngenxa abawasebenzisayo amandla lamanje aphethe;
- umonakalo ezishisayo ngenxa contact abampofu endaweni ukunamathela bentambo contact;
- design akuphumelelanga othintana beya, emva kwesikhashana i-plug-in isokhethi plug ngenxa okuyinto kahle okungaguquki, okubangela Ukushisa othintana nabo umonakalo.
Ake sicabangele ngayinye yalezi zizathu kabanzi. isokhethi ngamunye yakhelwe yinkampani eyakha ecacisiwe kuvunyelwe wamanje: plastic "ukugcwalisa" ngokuvamile imele ngaphansi zamanje kuka sobumba. Ngokwesibonelo, uma wamanje elicacisiwe 10, lokhu kusho ukuthi kungaba ukuthi usebenzisa ithuluzi elithile lisebenze amandla ukusetshenziswa kungekho kuka 2.2 kW (empeleni 2kW). Kodwa uma zihlanganisa umthwalo 5 kW, othintana nabo izindlu kwangaphakathi uzobe ezilimele futhi kuyodingeka uthole iziqondiso zendlela ukushintsha into yokuxhuma.
Bolting zidinga kokucindezelwa gqwa, futhi njengoba akekho owenza, sona leso kanye naso ukuncibilika esikhundleni okwalandela ke.
Oxhumana kufanele uvumelane crimp uhlobo ipulaki. Eshibhe Izitolo umzamo kuqinisekiswa uhlobo olukhethekile oxhumana. Kusukela ukusetshenziswa njalo, basuke buthaka, kukhona ukushisa. Esikhathini onobuhle ezibizayo, amandla design ifremu entwasahlobo.
Ngakho, indlela ukushintsha ukuphuma? Okokuqala, kuzomele ucisha ugesi. Lokhu kungaba okuzenzakalelayo "igatsha" kuphela noma nje yonke indlu wiring. Kunconywe ngu inkomba noma multimeter ukuqinisekisa ukuthi akekho voltage. Hlola nge elula ukufakwa lisebenze ipulaki ngeke isebenze, ngoba umshini angakwazi uxhume kahle ukuba aphule esigabeni kanye umqhubi hlangothi.
Khona-ke uyasikrufulula ngokucophelela umshudo ukuthi uthola eziko likagesi, bese uyalikhipha. Ngaphezu kwalokho, bonke kuncike design: ezinye amamodeli ngqo aboshelwe kuya ibhokisi obandayo, kodwa izixazululo ethandwa okwengeziwe ezimbili imilenze-spacers. Sihlola: ngokuvamile kubonakala ezinhlangothini ngezikulufo ezimbili cap, kancane uyasikrufulula futhi ususe ngokucophelela ngaphakathi kwezisekelo ebhokisini. Uma ukuxhuma izintambo ezintathu (amapayipi nge emhlabeni), khona-ke udinga ukuthenga oyisibonelo emithathu wire uxhumano. Uma izintambo ezimbili kuphela, ukuthi ulingana noma isokhethi. Into esemqoka - ukunquma namazinga: Soviet noma Euro (yabo ingafani ukujiya PIN_COUNT).
Uyasikrufulula imishudo ukuthi ubambe izintambo. Endabeni izintambo ezintathu kudingeka ukuba ukhumbule ukuthi "umhlaba," futhi ngo-esitolo esidayisa entsha ukuze ixhume ku-pin isisekelo. Lezi ezinye ezimbili kungenziwa exhunywe kwi-oxhumana nabo umyalelo okungahleliwe (uma azikho izidingo esikhethekile ukuhlukaniswa izigaba). Nge isokhethi entsha ukhipha ikhava, Bopha amapayipi umshudo izintambo ezifakwa ebhokisini obandayo, sidalula ezingeni oyifunayo (ukuthi wayengeyena esigwegwile) bese uvula twirl imishudo spacers. I spacers akufanele kulimaze izintambo. Setha ikhava bese akukhuthalele.
Kukhona futhi esidayisa phezulu. Basuke ayifakiwe ebhokisini Izintambo zikagesi ezisobala kanye screwed ngqo ungene ebusweni. Ngokuvamile, bajwayele ovulelekile wiring. Njengoba ezothatha isikhundla ngisho lula, njengoba kungekho spacers cha.
Amanzi amapayipi ukuze liphume igazi nendle ukwelashwa
Jens Lehmann: A Biography of unozinti German
Catamarans Inflatable ngezandla zabo: imidwebo, izithombe, izibuyekezo